IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၅) – BSI Learning Academy
Home IELTS IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၅)
Admin May 4, 2018 June 27, 2018 IELTS
IELTS စာမေးပွဲ မေးခွန်းလွှာမှာ အပိုင်း(၄)ပိုင်း ပါရှိကြောင်း၊ အဲဒါတွေကတော့ Listening, Reading, Writing and Speaking တို့ဖြစ်ကြောင်း “IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၁)” မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအပိုင်း (၅)မှာတော့ Speaking Part (1) အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IELTS Speaking Test မှာ အပိုင်း (၃)ပိုင်းရှိပါတယ်။
Speaking Part (1) က (၄) မိနစ်မှ (၅)မိနစ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Examiner က မိမိနှင့် မိတ်ဆက်ပါမယ်။ ထို့နောက် မိမိ၏ identification ကို စစ်ပါတယ်။ (IELTS test သွားဖြေတဲ့အခါ မိမိ၏ identity card (Passport or NRC) ယူသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Speaking Test Part (1) မှာ မိမိအကြောင်း၊ မိမိနှင့် မစိမ်းသည့် Familiar Topics တွေဖြစ်တဲ့ မိမိရဲ့ Job/ Studies, Hobbies, Hometown စတာတွေ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ link မှာ မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် Dos & Don’ts အချို့ကို ဖော်ပြပါမယ်။
1. Createagood impression.
2. Show your interests in the questions.
3. Extend your answers.
4. Try to rephrase the question words.
5. Enjoy the chat with the examiner.
6. Showcase your language skills.
8. Don’t give just yes/ no answers.
10. Don’t speak very quietly.
11. Don’t go off the topics asked.
** Getastudy partner orateacher to practise the Speaking tests. **
P.S. IELTS Speaking Part (1) practice လုပ်နေတဲ့ videoclips:
ELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၁)
IELTS, IELTS speaking part 1. Bookmark.